A kuqala e Turkey ..! Ukuqala kwexesha leTeksi ye-Smart e-Ankara
a kuqala e Turkey ..! Ukuqala kwexesha leTeksi ye-Smart e-Ankara; USodolophu kaMasipala wase-Ankara Metropolitan uMansur Yavaş, owenza esinye isithembiso sonyulo, wazisa uhlobo lokuqala lwe “Smart Taxi Project ına kumaphephandaba. Isicelo yokuqala Turkey [More ...]
I-TTSD yezoThutho Co. Ndwendwela uMlawuli Jikelele
I-TTSD yezoThutho Co. Ndwendwela uMlawuli Jikelele; Imanyano yabasebenzi beZothutho eManyeneyo (i-BTS) Amalungu eKomiti eLawulayo kunye nabaongameli beCandelo kunye ne-TCDD Taşımacılık A.Ş. Umphathi Jikelele Kamuran Yazıcı utyelele iofisi yakhe. Coca; [More ...]
Ukuvunywa kokuqinisekiswa kweZithuthi ezihamba ngoLoliwe eTürk Loydu
Ukwamkelwa kwesiqinisekiso seZithuthi zikaLoliwe ukuya eTürk Loydu; Iinkonzo zokuhlola ukuhambelana kweTürk Loydu kweenqwelo zikaloliwe zibandakanyiwe kwinqanaba lokuvunywa kwe-TS EN ISO / IEC 17065 imigangatho nguTÜRKAK. UTürk Loydu'nun uthe [More ...]
Ibhaso lamazwe aphesheya kwi-Istanbul Metro; Yakhelwe nguMasipala wase-Istanbul Metropolitan, u-ranimraniye-Ataşehir-Göztepe Metro uphumelele amabhaso wokuqala kudidi “Lokwakhiwa kweZiseko zoncedo” kumabhaso e-AEC, Olunye lokhuphiswano olubaluleke kakhulu emhlabeni. Umbhiyozo [More ...]
Imeko yasimahla yeKhadi lokuHamba eliSimahla laBantu abaDala eBursa; UMasipala waseBursa simahla kunye nommiselo wekhadi lokuhamba nge5. amalungu oMbutho waBantu Bonke Abadla Umhlala-phantsi [More ...]
I-2019 İZBAN Iiyure zokuThunyelwa kweXesha Yintoni i-İZBAN Ixesha eliVulekileyo? Ivala xesha liphi?
I-2019 İZBAN Iiyure zokuGxothwa, liliphi ixesha lokuvula kwe-İZBAN? Ivala xesha liphi ?; I-İZBAN yenye yeendlela ezinkulu zokuhamba zoluntu ezidolophini eTurkey ngokudibana kwesikhululo seenqwelomoya. [More ...]
Inkxaso evela kwi-TUVASAS ukuya kwiPhulo lokuTyala isiTayile; I-TÜVASAŞ ixhase amakhulukhulu eengcambu nguMphathiswa wezoLimo kunye namaHlathi ngesiqubulo esithi Ol Breathe to the future "kwaye ityale amakhulu eengcambu nguMphathiswa Wezolimo Namahlathi. [More ...]